नेकपा भरतपुरलाई जनता र प्रविधिसँग जोड्छौं : - Enepalese.com
नेकपा भरतपुरलाई जनता र प्रविधिसँग जोड्छौं :
इनेप्लिज २०७६ फागुन २२ गते २३:२१ मा प्रकाशित
प्रश्न : महानगर कमिटीको अध्यक्ष बनिसकेपछि के के काम गर्नुभयो ?
प्रश्न : महानगर कमिटीले पूर्णता पाएको छैन काम गर्न असहजता के के हुन् ?
महानगर कमिटीले पूर्णता नपाउँदा केही समस्या त पक्कै पनि भएको छ । तपापि वडा कमिटी बनिसकेको सन्र्दभमा बिस्तारित बैठक राखेर थोरै भए पनि पार्टी कामलाई तलसम्म पु¥याउन खोजेका छौं । महानगर कमिटी १२५ सदस्यीय बन्छ । केही नेताले यहाँ जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ । महानगर कमिटी सदस्यहरू भनेको भूगोलको पनि हुने हुँदा पार्टी काममा, वडा कमिटीसँग उहाँहरु पनि निकट भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले जस्तो जिम्मेवारीविहीन भएर बस्नु पनि पदैन । अर्कोकुरा उहाँहरुले महानगर कमिटीलाई रिर्पोटिङ पनि गर्नुहुन्छ । त्यसले ‘टु वे कम्युनिकेसन’ गराउँछ । पार्टीलाई स्मुथ र जीवन्त बनाउँछ भन्ने लाग्छ । महानगर कमिटीको पूर्णताका लागि हामीले केन्द्रीय सचिवालय र प्रदेश कमिटी एवम् इन्चार्जलाई समेत भनेका छौं । विधान बमोजिम कमिटी गठन गरिदिन अनुरोध गरेका छौं ।
अलिकति बुझाइमा समस्या छ । नेकपाको पार्टी विधानले महानगर कमिटी र पार्टी जिल्ला कमिटीलाई समान हैसियत दिएको छ । एकथरी नेताको बुझाई महानगर कमिटी जिल्ला भित्रकै भूगोलमा भएको हुनाले समान हैसियत दिनुहुन्न भन्ने छ । जिल्ला सरहकै मान्यता दिदा जिल्ला कमिटीको समानान्तर हुन्छ कि भन्ने भयले काम गरिरहेको देख्छु म । तर, वास्तवमा त्यस्तो हैन । बुझाइमा कमजोरी छ । एकथरी नेताहरु जिल्ला कमिटीभित्र महानगरलाई राख्नुपर्छ, एउटै हैसियत दिनुहुन्न भन्ने छ । विधानले क्लियर गरेको विषयमा खोचे थाप्नु राम्रो हैन । पार्टी महाधिवेशनसम्म यस्तो अभ्यास गरौं न के बिग्रन्छ ? भोलि समस्या आउने भयो भने महानगरले सोच्ला । त्यसैले यो ठूलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन । कमिटी नबन्दा काम गर्न असहज चाँही पक्कै भा छ ।
प्रश्न : अन्तिममा एउटा प्रश्न यहाँले महानगरपािलकाको कुरा पनि निकाल्नुभयो, महानगरको प्रमुख नै महानगर कमिटीको इन्चार्ज हुनुहुन्छ, महानगरले पार्टी चलाउँछ की पार्टीले महानगर ?
 खास केही छैन धेरै कुराहरु आइसकेका छन् । नेकपा भरतपुर महानगर कमिटीलाई देशकै नमूना रुपमा चलाउने मेरो योजना र सोच छ । हाम्रो पार्टी सञ्चालनको तरिकाको अनुकरण अरु पार्टी कमिटीहरुले पनि गर्न सकुन् भन्ने लाग्छ । यसमा पार्टी भित्र र बाहिरका सबै जनाको सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । यहाँले मेरा केही भनाईहरु राख्ने मौका दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहान्छु । धन्यवाद